वास्तुशास्त्र अनुसार कुन दिशामा फर्केको घर शुभ हुन्छ ? - समय-समाचार
(Saturday, 28th November 2020)
वास्तुशास्त्र अनुसार कुन दिशामा फर्केको घर शुभ हुन्छ ?
९ भाद्र २०७७, मंगलवार ०४:५८
वास्तुशास्त्र अनुसार विभिन्न दिशाहरुको विभिन्न स्वभावहरु हुन्छन् । दिशाहरुको स्वभाव अनुसारका संरचनाहरु त्यस दिशामा बनाउनु बनाउँदा शुभ मानिन्छ । पूर्व दिशाबाट सूर्योदय हुने भएकाले यस दिशाबाट निकै राम्रो उर्जाहरु आउने मान्यता रहेको छ । त्यसकारण पूर्व दिशालाई अन्य दिशाहरु भन्दा निकै महत्वपूर्ण मान्ने गरिन्छ । पूर्व दिशाको मालिक देवताहरुका राजा इन्द्रलाई मानिन्छ ।
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार यस दिशाको मालिक मङ्गल ग्रहलाई मानिन्छ । वास्तुशास्त्र अनुसार यस दिशामा वास्तु पुरुषको बायाँ छाती पर्दछ । घरको दक्षिण दिशामा धेरै जग्गा छोड्नु हुँदैन । यस दिशामा अरु दिशामा भन्दा बढी ठाउँ खाली छोडिएको छ भने घरमा धन सम्पति र मान मर्यादामा समस्या हुने मानिन्छ । घरको छत अर्थात् ढलान दक्षिणतिर ढल्केको हुनु पनि अशुभ मानिन्छ । छतको पानीको निकास पूर्व उत्तर वा पश्चिमतर्फ हुनुलाई राम्रो मानिन्छ । घरको दक्षिणतर्फ बनाइएको पर्खाल आग्नेय कोण वा दक्षिण दिशातर्फ ढल्केको छ भने पनि राम्रो मानिँदैन ।
जुन घडेरीमा घर बनाइएको छ त्यस घडेरीको जमिन दक्षिणतर्फ भिरालो छ भने त्यसलाई राम्रो मानिँदैन । छानोको पानी दक्षिणतर्फ झर्नेगरी घर बनाउन हुँदैन । शास्त्रअनुसार पश्चिम दिशाका मालिक वरुण देवता हुन् । वरुणलाई जलको देवता मानिन्छ । घरको पश्चिम दिशामा भत्किएको र चर्किएको भित्ता हुनुलाई राम्रो मानिँदैन । यस दिशामा गहिरो खाल्डो छ भने पनि यसलाई अशुभ मानिन्छ ।
उत्तर दिशाको मालिक धनसम्पत्तिका मालिक कुबेरलाई मानिन्छ । ज्योतिष शास्त्र अनुसार यस दिशाको प्रतिनिधित्व बुध ग्रहले गर्दछ । वास्तु शास्त्रका अनुसार यस दिशामा वास्तुपुरुषको छाती पर्दछ । यस कारण उत्तर दिशालाई वास्तु शास्त्रमा महत्वपूर्ण मानिन्छ । हाम्रा संरचनाहरुको उत्तर दिशामा बाटो भएको राम्रो मानिन्छ । तर उत्तर दिशामा बाटो भएपनि यही दिशाको पर्खाल वा घरको भित्तो चर्किएको छ भने अशुभ मानिन्छ ।
विशेष गरेर उत्तरबाट हल्का पश्चिम दिशातर्फ कुवा, इनार, वा पानी संकलन गर्ने स्थान हुनु राम्रो मानिँदैन । घरको उत्तरतर्फ भएका अनावश्यक रुख, काँडा वा पर्खालहरु हटाउनु राम्रो हुन्छ । यस दिशामा भएको गहिरा खाल्डाखुल्डीहरु पुर्नुपर्दछ । एजेन्सी